-Lọ ọrụ na-emekọrịta ọdịnaya maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke oge a: onye na-akọwa ihe | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » Inyefe ọdịnaya » -Lọ ọrụ na-ahụ maka ọdịnaya ụlọ ọrụ maka usoro mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ: onye nkọwa
-Lọ ọrụ na-ahụ maka ọdịnaya ụlọ ọrụ maka usoro mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ: onye nkọwa
Onye isi uwe ojii, Signiant
Na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke oge a, ịkwaga ọtụtụ ọdịnaya ngwa ngwa na nchekwa n'etiti ndị mmekọ dị oke mkpa. Akpaghị aka, mgbanwe n'etiti ụlọ ọrụ na-agbanwe ọdịnaya, n'etiti ụlọ ọrụ nha na ọdịdị ala, dị oke mkpa na mmepụta na ọbụna karịa na nkesa nke ihe nkiri dị iche iche na nke dịgasị iche iche, ihe ngosi telivishọn, egwuregwu vidio, akụ OTT / VOD, yana ihe ndị metụtara ha na metadata n'ọtụtụ ebe na ngwongwo ọkọnọ na gafere ọtụtụ nyiwe.
Eziokwu gbara ọkpụrụkpụ taa bụ na ọ dịghị nzukọ dị n'agwaetiti. Egwuregwu egwuregwu na-arụ ọrụ na ndị mgbasa ozi na ndị ikike ikikere mgbasa ozi gburugburu ụwa; ioslọ ọrụ na-ekesa ọdịnaya na sinima, ụlọ ọrụ TV na ndị na-ahụ maka eriri, nyiwe VOD, na nyiwe OTT; ndị agha nke ndị mmepe egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu gburugburu ụwa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ahụmịhe egwuregwu egwuregwu. Nke a agaghị ekwe omume na-enweghị mgbanwo ọdịnaya siri ike ma nwee nchebe nwere ike ịrụ ọrụ n'ime na n'etiti ụlọ ọrụ.
Ga na ịnweta ọdịnaya n'etiti otu n'ime nzukọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka n'onwe ya. Inwe ike ime nke a n'ofe otu dị iche iche na-eme ka mgbagwoju anya dị elu. Nyere ọnọdụ nke ụlọ ọrụ na 2020, ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ bụ ụkpụrụ na ụlọ ọrụ dị mkpa iji nwee ike ịgbanwee ọdịnaya ọsọ ọsọ na enweghị nhịahụ - nke ahụ bụ mkpa.
Mgbanwe ọdịnaya ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ: mmekọrịta mba ụwa, ọdịnaya mpaghara
Ndị ụlọ ọrụ M&E maara na mkpa na-arịwanye elu na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-achọ mmekọrịta iji hụ na okike na nkesa ọdịnaya ha. Ọchịchọ a na-achọkarị maka ọdịnaya a na-ahụkarị na ọtụtụ nyiwe ọhụụ na-egosiputa mkpa njikọta ejikọtara gafee ọtụtụ usoro nnweta dị mgbagwoju anya. Ma ọ dị mkpa iwepụta ọdịnaya maka nkesa na ọkwa zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu na-ebupụta isi ihe na ntanetị nke ndị mmekọ mgbasa ozi, azụmaahịa mgbasa ozi na-ahụkarị onwe ha na njikọta, mmekọrịta ha na gburugburu ebe obibi na-enwe mmekọrịta na-esikwu ike, yana agụụ ịkwaga ọdịnaya karịa ma dị mkpa. Na ebe nrụọrụ weebụ a jikọtara ọnụ ugbu a gụnyere mgbawa nke usoro na nyiwe dị iche iche (ụlọ ihe nkiri, saịtị ntanetị, ngwa mgbasa ozi mkpanaka) na-etinye nrụgide ka ukwuu na ndị otu iji zụlite mgbanwe ọdịnaya nke ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe.
Taa ụlọ ọrụ M&E nwere ike kesaa ọdịnaya ha n'ụwa niile gafee ọtụtụ nyiwe dị iche iche na ndị na-eweta ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ na-ebufe ụlọ ọrụ dị mkpa karịa na mbụ. Ma ọ bụ ikpo okwu VOD na-ebugharị ndị na-ahụ maka eriri ọdịnaya, ụlọ nkesa ihe nkiri na-eziga DCPs na cinemas, ma ọ bụ netwọkụ telivishọn na-ebugharị ọdịnaya n'ime nhazi, nkesa nke oge a chọrọ sistemụ njikọ jikọtara ọnụ nke na-akwado site na akpaaka, na-enyefe ụlọ ọrụ.
Mmepe egwuregwu So-anyanwụ
Ma ọ bụ, tụlee onye nrụpụta egwuregwu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche na aha ha kachasị ọhụrụ. Dika otu n'otu otu na-agbanwe na ulo ha lekwasịrị anya, ndi otu ha aghaghi inwe ntụkwasị obi na ha ga na enweta mburu nke egwuru-egwu emelitere oge obula, ka ha ghara ihu oru ha aka. tinye bụ na ihe ochie version. A choro nke a karia ya na ntinye oru nke ubochi nke na-adabere na ndi otu gafee otutu oge. Ijide n'aka na ụdị egwuregwu dị mma bụ ebe ọ dị mkpa ka ọ bụrụ mgbe ndị ọzọ ga-anọdụ ala iji rụọ ọrụ ha dị mkpa iji dozie usoro ịnyefe mgbagwoju anya, na-ezukọta oge (ọkachasị na ụlọ ọrụ a ma ama maka isi tweaking oge ikpeazụ) , na idebe, ihe nwere ike ịdị ka ogbaaghara, iwu ma baa uru.
Ihe omuma ihe omuma di iche iche dika uzo di iche-iche
Mgbe akpaghị aka, mgbanwe n'etiti ụlọ ọrụ na-eme ọtụtụ mgbe n'oge nchịkọta na nkesa, ọ nwekwara ike ịbụ ihe ịma aka n'oge usoro okike ọdịnaya. Mgbe ụlọ ọrụ post-Production na ụlọ VFX na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa, ha na-arụkarị ọrụ n'ụdị usoro site na-etiti dị ka DPX ma ọ bụ EXR. N'okwu ndị a, ekwesịrị ibughachi folda nwere ọtụtụ nde faịlụ gaa na studio ma ọ bụ ụlọ ọzọ a ga-emepụta mgbe emechara ya, dịkwa n'ụdị anyanwụ. Standard ngwaọrụ mgba na ndị a mgbagwoju data tent na otú ahụ ka nri software iji machiini a workflow-adị mkpa.
Ijikọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị ukwuu na ndị mmekọ SMB ha
Otu ihe ịma aka na-emetụta ụlọ ọrụ ahụ bụ na teknụzụ dị elu nke nnukwu ụlọ ọrụ na-anaghị enweta mgbe niile na ntanetị nke obere ndị na-eweta ngwaahịa dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ. Ọganihu na teknụzụ igwe ojii, kpọmkwem ihe ngwọta SaaS, na-enyere aka ịkwụsị ihe mgbochi ndị ahụ, na-enye obere azụmaahịa dị ike iji sonye na ngwa ahịa zuru ụwa ọnụ. A na - eme ka nsogbu nchekwa ahụ sie ike mgbe gị na ọtụtụ ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ, ọtụtụ n’ime ha pere mpe. Inwe usoro ihe eji eme ihe iji bia n'uzo di elu nke ulo oru nke taa choro abughi ihe okomoko, kama obu ihe choro. Ọbụghị naanị na ngwa ọrụ ga-echekwa ọdịnaya ha gbanwere, ọ ga-adịrịrị mfe itinye ya, jikwaa ya, ma bụrụkwa nke ziri ezi ma were ọnụahịa nke azụmahịa ọ bụla nakweere.
Kedu otu Signiant si eme ka mgbanwe dị n'etiti ụlọ ọrụ na-agbanwe
Signiant abụrụla onye ntụkwasị obi tụkwasịrị obi maka mgbanwe ọdịnaya ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọrụ mgbasa ozi kachasị elu nke ụwa na-eji njikwa anyị + Agents na-eji akpaghị aka agbanweta ọdịnaya n'ime na n'etiti ụlọ ọrụ. Ngwaahịa Media anyị na-enye ndị mmadụ ohere ịnweta na ịkekọrịta ọdịnaya gburugburu ụwa ma ugbu a na-ejikọ karịa azụmahịa 25,000 nke nha niile.
Mgbe anyị bidoro Signiant Jet ™ N'afọ gara aga, anyị chịkọtara ọkachamara anyị na arụmọrụ faịlụ na sistemụ arụmọrụ na ndị ndu anyị na igwe ojii SaaS. Nke ahụ mere ka Signiant nwee ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ nwere nha ọ bụla ma belata nke ukwuu maka nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ụwa na ịtọlite ​​mgbanwe ọdịnaya akpaghị aka na ndị mmekọ ha pere mpe.
Na mbido afọ a, Signiant gbasaa ikike nke ụlọ ọrụ ya, na-agbakwunye usoro dị arọ ma dịkwa nchebe na Jet maka mgbanwe ọdịnaya akpaaka n'etiti ụlọ ọrụ. Site na nke a, ụlọ ọrụ abụọ nwere Jet nwere ike ịhazi ntụkwasị obi obe n'ụzọ dị mfe ma nwee ntụkwasị obi, jikwaa igwe ojii niile. Na mgbakwunye, na ọtụtụ azụmaahịa na-anabata Jet, ụlọ ọrụ nwere ike ime ka njedebe ha chọpụta na igwe ojii anyị na-aga n'ihu na-eme mgbanwe nke ụlọ ọrụ ndị a.
Ozugbo ntụkwasị obi dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ, ha nwere ike ịtọlite ​​ọrụ kwenyesiri ike na ọrụ nnyefe ebe akụkụ nke ọ bụla nwere ike ijikwa njikwa nke nchekwa nke ha na netwọkụ ha. Ọ dịghị nke okwuntughe ma ọ bụ ozi ndị ọzọ dị nro achọrọ ka ejiri okwukwe aka jisie ike na igwe ojii. Nke a bụ isi uru na iche iche nke Signiant's patented ngwakọ SaaS platform ebe igwe ojii na-achịkwa ụgbọ elu na-enye orchestration, visibiliti na njikwa njikwa mana ọdịnaya na-aga site na nchekwa nke otu ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ.
Mgbanwe ọdịnaya nke ụlọ ọrụ maka oge a
Thelọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ntụrụndụ enwebeghị ụdị dị iche iche, nke zuru ụwa ọnụ, ma ọ bụ karịa karịa taa, na omume a ga-eme ngwa ngwa. Ọrịa ahụ na mmetụta ya na ụlọ ọrụ ahụ na-egosi mkpa ọ dị ịdị na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, na-enwe ike ijikọ n'agbụ ngwa ahịa buru ibu ma dịgasị iche iche. Yabụ kedu ihe ịchọrọ ịtụle iji kwadebe gị maka mmemme na-emetụta ụlọ ọrụ na-abịa?
Vinggafe nke ukwuu, nnukwu, data dị mgbagwoju anya n'etiti ụlọ ọrụ dị n'oge a chọrọ ụzọ ọhụrụ. Ọ chọrọ ngwanrọ nke nwere ike ịrụ ọrụ maka azụmaahịa ọ bụla, nke nwere ike iji ohere ọ bụla bandwidth dị, ma nwee ike iji ụdị nchekwa ọ bụla rụọ ọrụ. Ọ ghaghị inye nchebe ụlọ ọrụ na visibiliti; azịza nke na-enye ntụkwasị obi mgbe oge zuru oke na ọnọdụ na-agwụ ike. Ọ ga-adị mfe igbasa na-arụ ọrụ na-ekwe ka ụlọ ọrụ na-agile na-anabata ike ọdịdị nke ụlọ ọrụ. Ejiri Signiant Jet nwere ikike nke ụlọ ọrụ ya iji gboo mkpa ndị ahụ.
Nwere mmasị ịmụtakwu banyere Jet ma hụ ya ka ọ na-arụ ọrụ?
Previous: Onye na-eme ihe ngosi
Osote: GB LABS Na-egosi Ngwọta Nchekwa Maka taa na VRTUAL BROADCASTASIA